Daaficii hore ee kooxda Arsenal Emmanuel Eboue oo Xabsiga loo taxaabay Sabab? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Daaficii hore ee kooxda Arsenal Emmanuel Eboue oo Xabsiga loo taxaabay Sabab?
(08-07-2018) Daaficii hore ee kooxda Kubada Cagta Arsenal Emmanuel Eboue ayaa absiga loo taxaabay kadib markii ay Sabtigii qabteen Booliska Magaalada London ee loo yaqaan Metropolitan Police.
Emmanuel Eboue oo Arsenal u dheelayey intii u dhaxaysey 2005 ilaa 2011 ayaa lasheegayaa in lagu Samayn doono baaritaan kadib markii looga shakiyey dab ka kacay halka looyaqaan Enfield arson oo kutaala Magalaada London.
Afhayeen u hadlay Booliska London ayaa sheegay in Emmanuel Eboue lagu wado baaritaan kadib markii looga shakiyey dab ka kacay Enfield arson isla Markaana uu kujiro xabsi kuyaala waqooyiga Magaalada London.
Ninkaan oo 35 Sano jir ah ayaa musalifay kadib markii ay kala tageen Xaaskiisii oo kala wareegtay dhamaan hantidii uu lahaa mana jirto koox uu u dheelo hadda in kasta oo uu dhawaan sheegay in uu Garoomada ku soo laaban doono una dheeli doono kooxo ka kala dhisan dalalka Pakistan iyo Ciraaq.